Shiinaha SY Taxanaha Bullaacadda Warshad iyo soo saarayaasha | Convista
Nooca jidhka Y qaabka xagasha 45-degree
Maaddada jirka A105, F22, F91, F92, F316H
Bonnet heerka, qaabdhismeedka qaboojinta
Jar kursiga xidigta ee muhiimka ah
Xirxirida Garaaf jilicsan oo leh silig bir bir ah
Astaamaha qulqulka furitaan deg deg ah
Laba nooc oo firfircoonaan ayaa ikhtiyaari ah dhaqaajiyaha pneumatic diaphragm (pneumatic multi-guga iyo hal-guga diaphragm actuator ayaa ikhtiyaari ah sidoo kale kor-dhajinta iyo gacan-ku-riix gacmeed) ama dhaqaajiye bastoolad.
1) Y-hannaan been abuur ah, iska caabin yar oo socodka ah, qiimo sarreeya CV.
2) Cajal oo leh gabal ceejin ah, oo si wax ku ool ah u ilaaliya dusha sare ee dusha sare, dheereeya nolosha waalka.
3) Dusha sare ee maqaarka maqaarka maqaarka waxaa lagu daaweeyaa habeyn gaar ah oo loogu talagalay ka-hortagga, nabaad-guurka.
4) Laba wicitaan oo hage ah oo ku jira diskka ayaa hubinaya jirida dheellitirka jirku, dhaqdhaqaaqa dabacsan si looga fogaado ifafaalaha ciriiriga ah.
5) Xidhmo tayo sare leh oo xirxiraya garaafka GARLOCK oo la soo dhoofiyay, hanti kiimiko wanaagsan iyo dabacsanaan, khilaaf hooseeya, nolol adeeg dheer.
6) Xawaaraha isbedelka degdega ah, guud ahaan 3-5 ilbidhiqsi, wuxuu si wax ku ool ah u ilaaliyaa amniga nidaamka, wuxuu si weyn u yareeyaa waqtiga dusha sare ee daboolida ay baabi'inayaan warbaahinta.
7) Bonnet heatsink, qaboojiye ku filan si loo ilaaliyo firfircoonida pneumatic iyo waalka solenoid ee uusan saameyneyn heerkulka sare. Qalabka silsiladda gaaska ee 'Chamber gasket clip silig' mesh sare garaafka garaafka jilicsan, waxqabadka wanaagsan ee isku xirnaanta iyo kalsoonida marka loo eego celceliska garaafka jilicsan.
Qaybaha bullaacadaha uumiga ee Pneumatic ee lagu rakibay dhuumaha uumiga ee dhirta tamarta kuleylka, kaas oo loo qaybin karo iyadoo la raacayo booska sii kordhaya sida:
Val Fallaaraha bullaacadaha ee qiiqa uumiga
· Fiilooyinka kuleylka kulul ee kululeeyaha
· Qulqulka qashin-qubka tuubada qaboojiyaha
· Marxaladda koowaad, marxaladda labaad, marxaladda saddexaad, marxaladda afraad, heerka shanaad iyo soosaarida marxaladda lixaad faallooyinka tubbada tubbada
Jirka Kursi Saxanka Jirida Sanduuqa Waxyaabaha Xirxirida
A105 A105 + Dayaxgacmeed F22 + Dayax gacmeed 410 A105 Naqshad jilicsan
F22 F22 + Dayax gacmeed F22 + Dayax gacmeed 660 F22 Naqshad jilicsan
F91 F91 + Dayax gacmeed F91 + Dayax gacmeed 660 F91 Naqshad jilicsan
F92 F92 + Dayax gacmeed F92 + Dayax gacmeed 660 F92 Naqshad jilicsan
F316H F316H + Dayax gacmeed F316H + Dayax gacmeed F316H F316H Naqshad jilicsan
Hore: Nooca guga badbaadada
Xiga: MX Taxanaha Wareegga Wareegga Ugu Yar
Gaaska dareeraha ah, Gawaarida badbaadada socodka socodka
VSSJA-2 (B2F) Nooca Double Flange Limited Telesco ...
7109 nuugista Qalabka